Incwadi kaRute, ibali elivela kwiBhayibhile
Ibali leTestamente elidala ukuvuselela amakholwa onke amakholwa
Incwadi kaRute ibali elifutshane elimnandi elivela kwiTestamente Elidala (iBhayibhile yesiHebhere) malunga nomfazi ongeyena ongumYuda otshata kwintsapho yamaYuda waza waba ukhokho kaDavide noYesu .
Incwadi kaRute eBhayibhileni
Incwadi kaRute yenye yeencwadi ezincinci zeBhayibhile, ebalisa ibali layo kwizahluko ezine kuphela. Umntu oyintloko ngumfazi ongumMowabi ogama linguRute , umalokazana womhlolokazi ongumYuda ogama linguNahomi.
Yinto yeentsapho ezithandanayo ezimbi, ukusebenzelana ngobuqhetseba obunxulumano lobuhlobo, kwaye ekugqibeleni, ukunyaniseka.
Ibali lixelwe kwindawo engavumelekanga, ukuphazamisa ukuhlutha okukhulu kwimbali efumaneka kwiincwadi ezikujikelezile. Lezi ncwadi "zembali" ziquka uYoshuwa, abagwebi, 1-2 uSamuweli, 1-2 iiKumkani, 1-2 yeziKronike, uEzra noNehemiya. Bambiwa ngokuba yiMbali yeDuteronomi kuba bonke bawabelana ngemigaqo yezobubhalo echazwe kwiNcwadi kaDuteronomi . Ngokukodwa, baxhomekeke kwingcamango yokuba uThixo wayekhokele, ulwalamano olusondeleyo kunye nenzala ka- Abraham , amaYuda, kwaye wabandakanyeka ngqo ekubunzeni imbali kaSirayeli. I-vignette kaRute noNahomi ifaneleka njani?
Kwimiqulu yokuqala yeBhayibhile yesiHebhere, iTorah, ibali likaRute liyingxenye ye "imibhalo" (i- Ketuvim ngesiHebhere), kunye neyeKronike, uEzra noNehemiya. Abaphengululi beBhayibhile bexesha eliqhelekileyo bavame ukuhlukanisa iincwadi ngokuthi "i-history and history". Ngamanye amazwi, ezi ncwadi ziphinda zivuselele iziganeko zembali kwizinga elithile, kodwa zixela iimbali ngokusetyenziswa kwezixhobo zengqondo ezicatshulwayo ngenjongo yokufundiswa ngokwenkolo kunye nokukhuthazwa.
Ngexesha leendlala, indoda egama linguElimeleki ithatha umfazi wakhe uNahomi kunye noonyana babo babini, uMahaloni noKiliyon, empumalanga ukusuka emzini wabo eBhetelehem eJudiya ukuya ezweni elibizwa ngokuba nguMowabhi. Emva kokufa kukayise, oonyana babatshata nabafazi bakwaMowabhi, oOpa, noRute. Bahlala kunye iminyaka engama-10 kwada kwafa uMahalon noKiliyon, beshiya unina uNawomi ukuba ahlale kunye neentombi zakhe.
Ukuva ukuba indlala yayiphelile kwaYuda, uNahomi wagqiba ekubeni abuyele ekhaya, waza wabongoza ukuba intombi yakhe ibuyele koomama kwaMowabhi. Emva kokuphikisana okukhulu, u-Orpa wavuma ukuba umninazala wayenqwenela, wamshiya, wakhala. Kodwa iBhayibhile ithi uRute wanamathela kuNahomi waza wathi: "Uya kufika apho ndiya khona, ndiya kuhlala khona, abantu bakho babe ngabantu bam, noThixo wakho uThixo wam" (Rute 1:16). ).
Xa befikile eBhetelehema , uNahomi noRute bafuna ukutya ngokutyhola okusanhlamvu kwintsimi yomzalwana, uBhohazi. UBhohazi wanika uRute ukhuselo kunye nokutya. Xa uRute ebuza isizathu sokuba yena, umfokazi, afumane ububele obunjalo, uBhohazi waphendula ukuba wayefundile ngokuthembeka kukaRute kumamazala wakhe, waza wathandaza ukuba uThixo wakwaSirayeli wayemsikelela uRute ngenxa yokunyaniseka kwakhe.
UNawomi wazama ukutshata noRute kuBhohazi ngokumcela ukuba abe nobudlelwane naye. Wathumela uRute kuBhohazi ebusuku ukuba azenzele yena, kodwa uBhohazi othe tye akazange avume ukumnceda. Kunoko, wamnceda uNahomi noRute baxoxisana neminye imicimbi yelifa, emva koko watshata noRute. Ngokukhawuleza wazala unyana uObhede, wazala unyana kaYese, owayenguyise kaDavide, owaba ngukumkani wakwaSirayeli.
Izifundo ezivela kwiNcwadi kaRute
Incwadi kaRute yimihlobo ephakamileyo yemidlalo eyayingadlala kakuhle kwizithethe zomlomo zamaYuda. Intsapho ethembekileyo iqhutywe yindlala evela kwaYuda ukuya kwilizwe elingelona lamaYuda lakwaMowabhi. Amagama abo oonyana babingumzekelo wokubandezeleka kwabo ("uMahalon" uthetha "ukugula" kunye ne "Chilion" kuthetha "ukuchitha" ngesiHebhere).
Ukunyaniseka uRute akubonisa uNahomi uye wavuzwa ngokukhulu, njengokuba unyanisekileyo kuye uThixo oyinyaniso oninazala. I-Bloodlines yinto yesibini yokholo (uphawu oluphawulekayo lweTorah , apho oonyana abesibini abaphumelela ngokuphindaphindiweyo amalungelo okuzalwa okumele adlule kubazalwana bawo abadala). Xa uRute eba ngumakhulukazi kaSirayeli, uDavid, ithetha ukuba kungekuphela nje ukuba umntu wasemzini angenakunyaniswa ngokupheleleyo, kodwa mhlawumbi abe yintsimbi kaThixo.
Ukufakwa kukaRute kunye noEzra noNehemiya banomdla.
Ubuncinane ubuncinane, uRute wenza njengolukhuselo kwabanye. UEzra noNehemiya bafuna ukuba amaYuda ahlukanise abafazi bezinye iintlanga; URute ubonisa ukuba abantu abangaphandle abavakalisa ukholo kuThixo kaSirayeli banokuthi bajonge ngokupheleleyo kwilizwe lamaYuda.
Incwadi kaRute nobuKristu
Kwala maKristu, iNcwadi kaRute yintetho yokuqala yobuqaqawuli bukaYesu. Ukudibanisa uYesu kwiNdlu kaDavide (kwaye ekugqibeleni kuRute) wanika uNazarete ingumzekelo kaMesiya phakathi kokuqala ukuguqula ebuKristwini. UDavid wayeyindoda enkulu kakhulu yamaSirayeli, umesiya (inkokeli endiyithumele nguThixo) ngokwakhe. Inzala kaYesu ukusuka kwintsapho kaDavide kwimbini yegazi ngunina uMariya kunye nobudlelwane bomthetho ngoYosefu uyise owayengumntanini wabanika ukunyaniseka kwabafundi bakhe ukuba unguMesiya owayeya kukhulula amaYuda. Ngaloo ndlela kumaKristu, iNcwadi kaRute ibonisa uphawu lokuqala lokuba uMesiya uya kukhulula bonke abantu, kungekhona kuphela amaYuda.
Iintsuku zokuqala zeCawa yamaKristu yamaRoma
Yazi Abafundi 12 bakaYesu Kristu
Ngaba amaSirayeli ayakha amaPiramidi aseYiputa?
Ngubani Abaprofeti Abakhulu EBhayibhileni?
Kutheni uYesu wayebizwa ngokuthi 'nguNyana kaDavide?'
Iimidlalo ze-Classic zaseNtshona
Kutheni Ubume beMbali kwi-Amanda Knox Case
Imizekelo yeebhondi zeIonic kunye neeMveliso
Isibhengezo sePillnitz: Iphutha leTitanic ngeComputer Revolutionaries
Ukuqhekeka - Yintoni ukuxhamla?
I-Career Spotlight: IGosa lePolisa
Indlela yokufunda iMephu yeGeologic
A, An, & Naye
Iingcebiso zokuFunda ukuphucula ukubizwa kwakho
Amaqiniso Ngama-Sunfish aManzi aManzi
UPatrick Henry - u-American Revolution Patriot
Ukufunda iBhayibhile njengeNcwadi
Ukuqonda iSt-for-Tat Strategy
Ukufudumala kwehlabathi: I-IPCC yoVavanyo loVavanyo lweSine
Izipho eziphambili zeBike Riders
Shraddha: Ukholo lweBuddhism
Ziziphi iGesi zokuGcina?